तालिबानले महिलामाथि दमन गर्नुको कारण वैचारिकभन्दा पनि रणनीतिकNepalpana - Nepal's Digital Online
काबुल। सन् १९९० मा तालिबानले पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा महिलाहरुका लागि विश्वकै सबैभन्दा कठोर कानुन लागु गरेको थियो।
तालिबान समूहले अझै पनि इस्लामिक समाजको आधारभूत सिद्धान्ताको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। सैद्धान्तिकरुपमा यो कुरा केही हदसम्म सही हुनसक्छ। हरेक समूहको एक विचार, आस्था र सिद्धान्त हुने गर्दछ।
यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर शासन व्यवस्था सञ्चालनको आधार तय गर्ने गरिन्छ। केही तालिबानी अधिकारीहरु र शान्ति वार्तामा सहभागी भएका नेताहरुले अहिलेको शासन व्यवस्थामा महिलाहरुमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु खुकुलो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
त्यसो गरियो भने मानवअधिकारको आधारभूत मान्यताको पालना गरिएको भन्दै आर्थिक अनुदान र विदेशी सहयाता पनि प्राप्त हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। तर, केही तालिबानी नेताहरुले भने महिलाहरुलाई शरीया कानुन अनुसार नै व्यवहार गरिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
जसका कारण हरेक साता तालिबान सरकारले महिलामाथि नयाँ नयाँ प्रतिबन्धका प्रावधानहरु सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्। तालिबानको पछिल्ला गतिविधिहरुलाई मूल्यांकन गर्दा महिला स्वतन्त्रताको कुरा सैद्धान्तिकभन्दा पनि रणनीतिक र राजनीतिक बढी देखिन थालेको छ। महिलाहरुलाई स्वतन्त्रता दिइएको अवस्थामा उनीहरुले पनि शासन व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने चिन्ता पितृसत्तात्मक सोच भएका तालिबानी नेताहरुलाई रहेको छ।
पूर्व वाणिज्यमन्त्री मुकादिसा युरिसले तालिबान सन् १९९० मा जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै रहेको र तालिबान परिवर्तन भएको कुरा विश्वास गर्न नसकिने बताएकी छन्। अहिले उनीहरुमा आएको परिवर्तन भनेको पश्चिमा मुलुक र लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षधर मुलुकसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा सिकेको पूवमन्त्री यरिसले बताइन्।
तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गर्दा महिलाहरुलाई काम गर्न र विद्यालय जान दिने प्रतिबद्धता गरेकोमा अहिले काम पनि जान दिइएको छैन भने विद्यालयमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। घरबाहिर एक्लै निस्किएमा तालिबानका लडाकूहरुले दुव्र्यवहार गर्ने र यातना दिने गरेका छन्।
तालिबानले महिलाहरुलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न चाहिरहेकोसमेत उनले बताएकी छन्।
अफगानिस्तानमा तालिवानलाई धुरुक्कै रुवायो पंजशीर प्रान्तले, ३ सय तालिवानी लडाकु मारिए
अफगानिस्तानमा तालिबानी समूहद्वारा विदेशी मिडियामा कार्यरत पत्रकार लक्षित हत्या : रिपोर्ट
अफगानिस्तान : आईएसआई-के भनेको के हो ? किन तालिबानको आक्रमण बढ्यो ?
कार्तिक १, २०७८ सोमवार १२:१२:२१ बजे : प्रकाशित